အချိန်တိုအတွင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းနူးညံ့တဲ့ ဆံကေသာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Restore Smooth Blowout Concentrate! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အချိန်တိုအတွင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းနူးညံ့တဲ့ ဆံကေသာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Restore Smooth Blowout Concentrate!
အချိန်ကုန်ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး အချိန်တိုလေးအတွင်းပိုင်းမှာ စတိုင်ကျလှပတဲ့ဆံကေသာလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Restore Smooth Blowout Concentrate လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးဟာ ထူပြီး ပွရှုပ်နေတဲ့ဆံကေသာတွေကို နူးညံ့အိစင်းတဲ့ဆံကေသာလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားဘယ်လောက်ပင် ပျက်စီးပြီး ထူပါလေစေ ဆံပင်ဖြောင့်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲ ဆံသားဝပ်ဝပ်လေးနဲ့ သဘာဝအတိုင်းလှပတဲ့ ဆံကေသာကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Product ဟာ ဆံသားကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပြီးနူးညံ့စေနိုင်သလို Dryer အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ Heat Damage ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပုံသွင်းပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပါစေ ဆံသားကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အရမ်းကိုအသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကိုလျှော်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဆံပင်ကို ခြောက်အောင်အနည်းငယ်သုတ်ပေးပါ။ ဆံပင်ကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီး Restore Smooth Blowout Concentrate ကို အနည်းငယ်ညှစ်ယူပြီး ဆံပင်အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းတဲ့အခါမှာ ဦးရေပြားနဲ့မထိဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှ သပ်ရပ်တဲ့ဆံသားလေးဖြစ်အောင် ဘီးအပွအကြီးကို အသုံးပြုပြီးဆံသားကို ပုံသွင်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်အတွင်းမှာ ဆံပင်ခြောက်ပြီး နူးညံ့အိစင်းတဲ့ဆံသားလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ အကယ်၍ ဆံလုံးထူပြီး ကောက်ကွေးတဲ့ဆံသားပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Restore Smooth Blowout Concentrate ကိုပိုအသုံးပြုပေးပါ။
အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာ တကယ်ပဲမထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆံကေသာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ Review တွေကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့အပြင် အသစ်ထွက်လာတဲ့ Product ဖြစ်တာကြောင့် Try ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်နော်။
Image Source: www.livingproof.com/buy/restore-smooth-blowout-concentrate
အသားအရေ Sensitive ဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံအထွက်များသူတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Blemish cream!